नयाँ गर्भनरमा म्याग्दीका डा. मीनबहादुर पनि चर्चामा | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक नयाँ गर्भनरमा म्याग्दीका डा. मीनबहादुर पनि चर्चामा
नयाँ गर्भनरमा म्याग्दीका डा. मीनबहादुर पनि चर्चामा
२०७६, १४ पुष सोमबार १२:१७
पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आगामी चैत ६ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट सेवा निवृत्त हुँदै गर्दा नयाँ गर्भनरको चर्चा सुरु भएको छ । सेवानिवृत्त हुनुअघि गभर्नर एक महिना विदा बस्ने चलन रहेकाले अहिलेदेखि नै सम्भावितहरूको चर्चा चल्न थालेको हो।
अर्थमन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर ’ग्ल्यामरस’ पद भएकाले विभिन्न ब्यक्तिलाई नयाँ गर्भनरको चर्चामा राखेर समाचारहरु आउन थालेका छन् । नेकपाको सरकार रहेको अवस्थामा पुर्व एमाले र माओवादी सर्मथितबाटै नयाँ गर्भनर चयन हुने निश्चित भएसँगै सम्भावित ब्यक्तिको चर्चा सुरू भएको हो ।
पूर्वएमाले सर्मथितको चर्चा अत्याधिक भएपनि माओवादीको सिफारिसलाई समेत कमजोर देखिएको छैन् । पाँच वर्षे कार्यकाल हुने गभर्नर पद तुलनात्मकरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने भएकाले पनि सुरक्षि जोनको रुपमा गर्भनर पदलाई लिने गरिन्छ । चर्चाका पात्रमा म्याग्दीका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नाम समेत अग्रस्थानमा देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ अनुभवी भएकाले उनको नाममा सहमति जनाउन सक्ने सम्भावनालाई कमजोर थानिएको छैन् । हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गर्भनर हुदाँ समेत आफ्नो विश्वास जित्न सफल भएका डा. श्रेष्ठप्रति सकरात्मक छन् । डा. श्रेष्ठले आफ्नो जिम्मेबारीलाई समयमै सम्पन्न गर्ने भएकाले पनि उनको विज्ञताले गर्भनर पदलाई सजिलै हाक्न सक्ने भएकाले चर्चा श्रेष्ठका केन्द्रित हुनुलाई स्वभाविक मानिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मीनबहादुर श्रेष्ठ योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका थिए। पार्टी एकीकरणपछि बनेको वर्तमान सरकारका कतिपय योजना तथा काम कारवाहीलाई उनले ’लो प्रोफाइल’ मा बसेर सघाइरहेका छन्। अनुशासित उच्च आर्थिक वृद्धिको पक्षमा श्रेष्ठ छन्।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं ४ सिंगामा हरियाली मोडलको कृषि फार्मको योजनाकार समेत रहेका श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा कृषि र पर्यटनको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भएकाले नेपालमा हरियाली मोडलमार्फत कृषि, पशुपालन सहित अन्य योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
लामो समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेका उनले आठ अर्बको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने विषयमा वर्तमान गभर्नरलाई सघाएका थिए। श्रेष्ठजस्तै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट अवकास भएपछि अहिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गरिरहेका महाप्रसाद अधिकारी लगायत छन् । बिजमाण्डू डटकमको सहयोगमा तयार पारिएको
Previous articleम्याग्दी क्याम्पसका विद्यार्थीलाई योग शिक्षा
Next articleटिमुरको फाइदा के हो ?